Dowladda Kenya oo sheegtay in ay Gacanta ku dhigtay rag doonayay in ay Al-shabaab ku biiraan – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Waving flag of Kenya and United Arab Emirates
Dowladda Kenya oo sheegtay in ay Gacanta ku dhigtay rag doonayay in ay Al-shabaab ku biiraan
Dawladda Kenya ayaa Gacanta ku dhigtay rag dhalinyaro ah oo la sheegay in ay doonayeen in ay ku biiraan Al-shabaab.
Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku warramaya in ciidamada ammaanka Dowladda Kenya ay gacanta ku dhigeen rag dhalin yaro ah oo qorsheynayay ku biiritaanka Al-shabaab, Gudoomiyaha ismaamulka Siaya, Michael ole Tialal, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen shan dhalinyaro ah, waxaa uu sheegay in ay heleen xogta raggaan, sidaasna ay kaga hortageen.
Waxaa guddoomiyuhu uu sheegay in ay wadaan baaritaanno, sidoo kale waxaa uu sheegay in Nin ka mid ah dadka deegaanka uu u qorayay Al-shabaab raggaan.
“Ninka la tuhmayo in uu Al-Shabaab Dhallinyarada uga qoro degaankaas ayaa sanado ka hor qaatay Diinta Islaamka,waxaa uu tababar u aaday Soomaaliya kaddibna dib uyuu ugu laabtay Kenya, isaga oo qaabilsan qoridda dhallinyarada” ayuu yiri Mr Tialal.
Alshabaab ayaa inta badan weeraro ka gaysta Gudaha Dalka Kenya waxaana ugu danbeysay weerar ay dhawaan ku qaadeen Gaari Bas ah oo ay ay ku dileen muwaadiniin Kenyaan ah oo ka koobna shabcab iyo Saraakiil Ciidan.